Qarax loo adeegsaday gaari oo ka dhacay Buulo-burte, 7 ayaa ku dhimatay. - Wargeyska Faafiye
Qarax loo adeegsaday gaari iyo weerar xigay ayaa saaka ka dhacay degmada Buulo-burte ee gobolka Hiiraan, waxaana ku dhimatay toddobo qof, afar kalena waa ay ku dhaawacantay.
Dad dhintay waxaa ku jira abaanduulihii guutada 10-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee gobolka Hiiraan, Kornayl Maxamed Aamiin, afar askari oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka iyo saddex askari oo ka tirsanaa ciidanka dalka Jabuuti ee qeybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM.
Qaraxa ayaa loo adeegsaday gaari nooca xaajiyadda loo yaqaanno oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa, wuxuuna ka dhacay afaafka hore ee hoteelka Camalow. Maleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab ayaa qaraxa kaddib waxay rasaas xooggan is-waydaarsadeen ciidanka dowladda ee ku sugnaa hoteelka afaafkiisa.
Saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ayaa sheegay inay weerarka ku dileen dhowr iyo toban ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ee ku lugta lahayd weerarka.
Ciidanka xoogga dalka iyo kuwa AMISOM ayaa Khamiistii la soo dhaafay ka qabsaday maleeshiyada Al-Shabaab magaalada Buulo-burte.
Magaalada waxay 200 km dhinaca waqooyi uga beegan tahay magaalada Muqdisho. AMISOM ayaa guul wayn ku tilmaamtay qabsashadeeda maadaama ay saldhig u ahayd boqollaal ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsRaggii Dilay Sheikh Cabduqaadir oo la Toogtay.Al-Shabaab gives new beard order .Qof Dumar ah oo xabad ku dhacday -dabaaldagii Minneapolis .Kismaayo: Duqeyn mar kaleAdoption of a Somali girl, 3, by lesbians is halted after protests.